Ungandibonisa indlela yokufumana i-backlink ngaphandle kokulimaza i rankings?
Ngaphambi kokukubonisa indlela yokufumana i-backlink ngendlela engcono kwaye ngaphandle kokufumana isohlwayo esinzima, makhe sijonge ngakumbi. Asikho isidingo sokuthi ufanele ukwakha iziqulatho eziphezulu zokupompa izithuthi ezingakumbi kwiwebhusayithi yakho okanye kwiblogi. Kwaye mhlawumbi kunomsebenzi obonakalayo kakhulu kodwa ukonakala kakhulu kwaye unzima kakhulu ukuba "uzuze" ezo zinto zifanelekile emva komxholo wakho. Ngoko ke, umntu kufuneka ahlale edala umxholo omhle ukukhangela amanqaku amaninzi ngokwemvelo, i. e. , indlela ephephile kunokwenzeka. Kodwa umbuzo uhlala - indlela yokufumana i-backlink ngokubhala kwakho kwiphepha elikhangayo ngokukhawuleza, ekunikezelweni ukuba ukhange abaphulaphuli abemi kunye nokuyihlanganisa kunye kwiwebhusayithi yakho okanye kwiblogi, kuya kufuneka ufune ukuba neprofayili enxulumene neyona ndlela-ukufuna ukunyaniseka ziindwendwe kwaye zivumela ukuba zidibanise nawe?
Isiqulatho Ngaba nguKumkani-ngokuphindaphindiweyo kwakhona
Kuthetha ukuba kufuneka usebenze ngokufanelekileyo kwaye uqale usebenze kwiphepha lakho elilodwa elifanelekileyo kunye nelo lifanelekileyo ngoku. Kodwa ufuna ukwazi indlela yokufumana i-backlink ngokukhuselekileyo ukuze ungakhathazeki malunga neempembelelo ezinobungozi ezingena kwiwebhusayithi okanye iblogi, kunene? Masijamelane nayo - ukuphepha izigwebo ezihambelanayo nomzamo wokuqhagamshelana ngokuqhelekileyo onxibelelwano awukho malunga nenhlanhla yakho - konke malunga nokufumana i-backlink ephezulu ngokusemgangathweni kunye nangokwemvelo. Kuthetha ukuba u-backlink wangokwemvelo kunye nombhalo onokwakheka kakuhle owenziwe kumthombo osisigxina nowomntu wesithathu ochaphazelekayo kwi-niche yakho okanye shishini loshishino - akayi kuhlawulwa. Kwaye kungena ngaphandle kokuthetha ukuba nayiphi na isicwangciso sokubambisa, ishintshiselwano okanye iinqununu zesakhiwo soqhagamshelwano kufuneka sigwenywe ngaphandle kokuba ufuna ukuphakamisa ifulegi ebomvu kunye ne-Google kwaye uzitholele ngokwesiqhelo esheshayo kwaye esingaqhelekanga.
Nantsi indlela yokufumana i-backlinks yezinga eliphezulu ukufumana umdlalo webhuculo olusakhulayo ngokukhawuleza - umgangatho awunelanga nje ukuziva ukhuselekile kodwa ukukunceda ukuqhubela phambili iphrojekthi yakho yonke ekujoliswe kuyo kwi-SEO kwinqanaba. Ngoko, ngaphantsi ndiza kubhala uluhlu lweendlela ezimbini ezibalulekileyo ezinokukunceda ngokwenza umxholo womsindo - kunjalo, ngokuyinhloko ngenxa yokwakha ikhonkco.
Yiba nomxholo wekhasi elixhaswe ngokukhawuleza Ukuhlawula ngeCash
Yenza umsebenzi wokufumana ama-freelancers - zama ukufumana abalobi bezakhono ezikhokelayo kwi-niche yakho jikelele. Akusiyo ingcamango ephosakeleyo-emva koko konke, ukuba nakho konke okukuyo kwaye kulungelelaniswe neemfuno zakho kuyafaneleka ukuhlawula. Ubuncinane ekuqaleni, uze uzuze ukhululo kwaye uza kukwazi ukujongana nezinto ezithile zomxholo onomxholo ngaphandle kolunye uncedo lwabantu abathathu. Iqhinga: ungalokothi uphumelele ngokusasaza, ungcono usebenze ngokuthobeka kwaye uqale ingxoxo enomusa ye-imeyile, uzinge ngokwakho, iprojekthi yakho ye-intanethi, kunye nexesha lokuchitha ixesha elaneleyo lokuvavanya wonke umbhali oqulathe umxholo ngaphambi kokuba aqeshwe.
Yiba ne-Altruistic - Nika ulwazi lwakho oluhle kakhulu Ukuhlawula ngexesha
Ngokuqhelekileyo, xa kuziwa ekufumaneni i-backlink kunye nabasebenzi bakho, ininzi yethu Ukukholelwa ngokungekho nto ukuba ukubhengezwa kwabavakalisi mhlawumbi kuyisisombululo esisenzayo kuphela. Kodwa akuyona ibali elipheleleyo, ndinokuqinisekisa. Nantsi uluhlu olutshanje lwenqabana yebhalothi yenkcazelo yakho yexesha elizayo:
Zama ukubhala ezinye izithuba ezihambelana nezindwendwe ukuze ulandele i-backlink efanelekileyo kwi-bio. Oko kuya kuba kuhle ukuqala kwesiqalo, kodwa le ndlela ayiyiyo eyiyo yokuseka uxhulumano olunamandla.
Khawucinge ngokutshala ixesha lakho kunye nemizamo ekudaleni iindidi zemixholo elandelayo ebonakalayo ukwabelana kunye nokuqhagamshelana nayo, njengezikhokelo ezibonakalayo, izifundo zakho zecala, iifographics ezikhangayo, iipredishithi ezifanelekileyo, njl njl.Qaphela: zama ukuphinda uphinde ufake inxalenye yakho ekhoyo - akukho mfuneko yokubuyisela isondo, kunene?
Umsebenzi ngokuqhubekayo ukuvula ubungqina obuqinileyo kwi-intanethi kwiindaba zentlalo, kungekhona nje ukukhuthaza umxholo wakho onokubambisana kunye noxhasayo kodwa ukuphucula igama lakho negama okanye igunya loshishino ngexesha elifanayo.
Kwizinto ezinokubaluleka kakhulu kodwa ezingenakufumana ngokuzenzekelayo ezivela kwiindawo zemfundo okanye zikarhulumente ezinokugqibela kwekhasi le-PageRank kunye nokulinganisa isisindo, cinga ukubeka i-scholarship, ukuqhuba umncintiswano, okanye ukubethelwa ngokuchanekileyo-unikezele ngento echazwe ngokukodwa. kanye nento abafuna ukuyiva. Khumbula, i-backlinks eyona nto ibalulekileyo kwaye ikhuselekileyo ayikho imali emva kwayo yonke into Source .